गोकुल बास्कोटा सहित ३ सांसदलाई फेरी लाग्यो यति ठुलो आरोप ! - News36media
गोकुल बास्कोटा सहित ३ सांसदलाई फेरी लाग्यो यति ठुलो आरोप !
May 18, 2020 May 18, 2020 News36mediaLeaveaComment on गोकुल बास्कोटा सहित ३ सांसदलाई फेरी लाग्यो यति ठुलो आरोप !
लमजुङका विजयप्रकाश मिश्रले पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटासहित २ सांसदबाट आफु र आफ्नो परिवारको जीऊ धन ख’तरामा परेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका छन् । मिश्रले बास्कोटासहित सांसदहरु सूर्य पाठक तथा प्रेम आलेबाट आफुहरु असुरक्षित रहेको भन्दै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका हुन् ।
मिश्रले पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका बास्कोटाको निर्देशनमा टोखा नगरपालिका ११ मा रहेको आफ्नो घरको तस्बिर समेत लिएको बताएका छन् । तस्बिर खिच्नका लागि ४ जना युवाहरुको आएको समेत उनले निवदेनमा उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले घुस बार्गेनिङ गरेको अडियो मिश्रले सार्वजनिक गरेपछि उनले तत्कालै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
आले डोटी र पाठक बाग्लुङबाट निर्वाचित सांसद हुन् । मिश्रले ताप्लेजुङका घनबहादुर कुताल र चित्रबहादुर कुतालले आफ्नो ठेगाना पूर्वमन्त्री बास्कोटालाई दिएको दाबी गर्दै आफुलाई मार्ने ष’डय’न्त्र भैरहेको समेत बताएका छन् ।
ठुलो खुसीको खबर : कोरोना भ्याक्सिनको विकासमा पहिलो पटक मिल्यो यति ठुलो सफलता ! सबैलाई शेयर गरौ
बंगलादेशी डाक्टरले गरे कोरोनाको औषधी बनाएको दावी, ४ दिनमै बिरामी ‘नेगेटिभ’!
कहिल्यै नब्युझिनेगरी मलेसियामा अस्ताए खाना खाएर सुतेका धनबहादुर
March 16, 2020 March 16, 2020 News36media
ड्युटी जाँदै गरेकी स्वास्थ्यकर्मी शोभाको मृत्यु
April 1, 2020 News36media
एकै प’रिवा’रका चा’रज’ना झु’न्डि’एर आ’त्म’ह’त्या
September 20, 2020 September 20, 2020 News36media